Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roshora zvikuru hurongwa hwebhiri rekuvandudza mitemo inobata nyaya dzedzidzo richiti kurambidza kuranga vana vechikoro vanenge vakanganisa kuri kuda kuiswa mumutemo mutsva uyu kunosiya varairidzi vari panguva isina kunaka, ukuwo rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richitiwo riri kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unobata nyaya yedzidzo uyu.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanobatana nesangano reTajamuka vachinetsana nemapurisa ari kuvabvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvi zvinonzi zvaitikawo kuNorton.
Vagari vekuChinhoyi, zvikuru vanogara mumusha weAlaska, vochema chema zvikuru nekushaya mvura munzvimbo yavanogara.
Muchirongwa cheLiveTalk - Women’s RoundTable 8pm tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapihwa nedare repamusoro pagakava rehutungamiri muMDC pamwe nekutarisa zvinoreva zuva revanhukadzi remother's day.